Blades Big HVLS Taageerayaasha Madaarka
Gegada diyaaradaha ee Bali, waxaad ku arki kartaa taageerayaasheena markaad ka soo degayso garoonka diyaaradaha.Waxa ay ku kulushahay dalka Indooniisiya, taageerayaasha HVLS-na waxay noqdeen hab wanaagsan oo ay ku qaboojiyaan isla markaana ay hawo ku galaan….
Isku wareejinta hawada oo dheellitiran waxay xaddideysaa hawo fadhiisata, dhibco kulul iyo qabow, iyo uumiga, kaas oo gacan ka geysanaya in cuntada la dhigo oo la soo saaro qalalan oo cusub si loo yareeyo burburka….
Taageerayaasha HVLS way isbadaleen maadaama tikniyoolajiyaddu si dhakhso leh u soo hagaagtay. Hadda waxaa laga helaa meelo kala duwan oo warshado, ganacsi iyo goobo la deggan yahay, oo inta badan lashaqeeya nidaamyada HVAC ee keydinta tamarta. Xaqiiqdii, taageerayaasha HVLS tamarta ku shaqeeya waxay si dhakhso leh ula wareegeen door hoggaamineed ee dhaqdhaqaaqa dhismaha cagaaran…
Ventilation Gym Corssfit Taageerayaasha Australia
HVLS Gym Corssfit Fans Australia Waa muhiim in la aqoonsado doorka xakamaynta cimilada ay ka ciyaareyso in lagu ilaaliyo goobaha isboortiga ee gudaha, jimicsiyada gaarka ah, iyo xarumaha jirdhiska, naadiga caafimaadka qabow iyo hawo. Hadaadan wax fikrad ah kaheyn waxa uu yahay taageere mug-sareeya, xawaare-yar (HVLS) ayaa u sameyn kara xakamaynta cimilada ……
HVLS Saqafka weyn Fan
OPT HVLS taageereyaasha, dhexroorka u dhexeeya 2.7m ilaa 7.3M, waxay kaa caawinayaan xalinta dhibaatada qaboojinta iyo hawo bixinta….
Warshadaha Weyn ee Filibiin
Taxanaha OPT Navigator nooca cusub ee marawaxada saqafka ayaa markii ugu horeysay loogu talagalay iyadoo la adeegsanayo aragtida PMSM ujeedada laga leeyahay dhimista qiimaha soo saarista. Tamarta sidoo kale waa la keydin karaa ugu yaraan 50% marka mootada nooca cusub la barbar dhigo taageere-dhaqameedka caadiga ah ee ku saleysan mootada soo-gelinta. PMSM cusub ayaa looga baahan yahay inuu la kulmo ……
Taageerayaasha PMSM Motor HVLS
OPT PMSM taageereyaasha mootada Hordhac- Taageerayaasha mootada PMSM Hawada ka timaada taageere HVLS waxay u dhaqaaqdaa dhanka dabaqa shax ka ifaysa dhammaan jihooyinka, si tartiib ah ayey u socotaa illaa ay ka gaarto derbi - ama qulqulka hawada ka tageysa taageere kale - taas oo barta ay u jeesaneyso kor iyo dib ugu qulqulaya marawaxadda. Tani ……
Saqafka weyn Taageerayaasha Blades dheer
Saqafka Dheer Taageerayaasha Blades…
OPT HVLS PMSM Taageerayaasha Dayactirka Lacag Weyn ee Ganacsi
OPT PMSM taageere wuxuu leeyahay dhexroor ugu badnaan 7.3 mitir ah. Wax soo saarku wuxuu isku daraa tiknoolajiyad casri ah sida aerodynamics, dynamics gudbinta, garaaca garaaca garaaca garaaca wadnaha farsamada, makaanikada makaanikada, tikniyoolajiyadda jilitaanka, xakamaynta isgaarsiinta, qaabeynta warshadaha, iwm. Waxay dhiirrigelin kartaa wareegga hawada hawada ee hoos yimaada waxtarka aadka u sarreeya, waxay gaari kartaa ujeeddada shaqaalaha qaboojinta, waxayna si weyn u hagaajineysaa raaxada deegaanka….
KQ Taxanaha-HVLS Taageerayaasha Saqafka Weyn
OPT HVLS Taageerayaasha Saqafka Dheeraadka ah Hordhaca-Taageerayaasha saqafka weyn ee dheeriga ah Taageerayaasha saqafka dheeriga ah waa taageere xawaare sare leh oo xawaare hooseeya oo loo adeegsado meel bannaan oo ballaaran oo loogu talagalay qaboojinta iyo hawo-qaadashada. Hadda waxaad haysataa hab wax ku ool ah oo qiimo leh oo aad ku qaboojiso xilliga xagaaga iyo kuleylka xilliga qaboobaha. Qurxoon ……
OPT PMSM Taageerayaasha Tamarta Keydka Tamarta
PMSM magnet iskuxiraha biriijka tooska ah ee iskudhafka tooska ah wuxuu leeyahay xakamaynta xakamaynta sare, cufnaanta cufnaanta sare iyo xasilloonida culeyska wanaagsan. Qaylada hoose, cabirka yar, waxtarka sare, cunsur sare, waxqabadka tamarta wanaagsan iyo heerkulka oo hooseeya rise.
10 Ft HVLS Saqafka Fan - PMSM Motor-For Industrial / Commercial
OPT 10FT HVLS PMSM Motor Industrial Qaboojinta Taageerayaasha Hawada leh matoorro aamusnaan-aamusnaan la'aan ah oo ka dhigaya hoormoonka mid u muuqda mid qaylo badan, oo quruxsan, naqshado abaalmarin ah oo u beddelaya saqafkaaga xarun dhexe, taageerayaasheena ganacsiga ayaa ka dhigi doona meel kasta xafiisyada illaa warshadaha ......